Tonga eto ny Sekolin'ny Rahampitso!
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Tonga eto ny Sekolin'ny Rahampitso!
School of Tomorrow - sary nahazoana lalana avy tamin'ny pexels.com
Mahomby ve ny fampianarana an-tserasera? Hanampy ny zanakao hianatra tsara kokoa sy hahatratra ny tanjon'ny asany ve izany? Matetika ny mpianatra dia manontany ireo fanontaniana lehibe ireo alohan'ny hanatanterahana ny fepetra takiana mba hahazoana mari-pahaizana amin'ny Internet. Eny, ny sekoly an-tserasera dia mandaitra ary tokony hanome ny mpianatra fahalalana mitovy amin'ny fampianarana nentin-drazana. Noho ny tontolo nomerika mivoatra, ny rindrina dia tsy midika ho rindrina efatra fotsiny. Ny fampianarana an-tserasera dia safidy tsara omena mpampianatra mahay sy mahay manohitra sy mampitombo ny fahaizan'ny mpianatra mampiasa fitaovana haitao avo lenta, toa ny Apple, Google, sns. Tianao ve ny fahombiazan'ny zanakao matihanina? Tohizo ny famakiana mba hahalalanao fanazavana kely momba izany ny tombony azo amin'ny fampianarana an-tserasera.
Ny fanabeazana an-tserasera dia manome ny fifehezana ireo lahateninao
Ny fampianarana an-tserasera dia saika mitovy amin'ny sekoly nentim-paharazana, izany ihany no ianaranao avy any an-trano. Afaka mahazo isa mitovy amin'izany ianao ary mianatra toy ny hoe ho any an-dakilasy. Amin'ny tranga maro, ny mpianatra dia nahavita vokatra tsara kokoa noho ny mpianatra tao an-dakilasy. Mazava ho azy fa tsy ny mpianatra rehetra no hanao fampisehoana amin'ny fomba mitovy, ary tsy maninona izany. Fianarana an-tserasera NSW afaka manome fifehezana ny mpianatra amin'ny taranja ianarany. Hanana fifandanjana eo amin'ny andraikitra amin'ny fanabeazana sy ny fiainany manokana izy ireo. Ny fifehezana ny fianaranao dia midika fa hifehezana manan-danja amin'ny fanadinana, lahateny ary famerenana ireo fitaovanao ianao. Hanana fahalalahana hianatra sy hihaino taranja amin'ny fiatoana atoandro izy ireo. Ary koa, raha te hanamafy hevitra sy hevitra momba ny lahateny teo aloha ianao dia afaka miverina amin'ny fotoana tianao.
Hanana fotoana bebe kokoa handinihana ianao
Ny hevitra hianarana any an-trano dia niova be nandritra ny taona maro. Ny fidirana an-dakilasy dia tsy safidy tokana handinihana, farafaharatsiny tsy hatramin'ny nisian'ny Internet, izay nanome safidy betsaka ho an'ny mpianatra. Ankehitriny, manana fidirana amin'ny fianarana kalitao izy ireo isaky ny mila, raha mbola misy ny fidirana amin'ny Internet ary manana solosaina izy ireo. Ny fianarana an-tserasera dia mamela ny mpampianatra sy ny mpianatra hametraka ny fandaharam-potoanany sy ny hafainganan'ny fianarany. Amin'izany fomba izany dia handanjalanja ny fianarana sy ny asa ny tsirairay, ka tsy ilaina ny zaza rehetra miala amin'ny fianarany. Izy io koa dia mampianatra ny mpianatra ny fahaiza-mitantana fotoana ilaina, izay hanampy azy ireo handray andraikitra vaovao sy hanana fahaleovan-tena bebe kokoa.
Tsy dia miady saina loatra ny mianatra an-tserasera
Manome antsika fahaiza-manao sy taranja tsy voafetra hianarana ny Internet. Ny sekoly fanabeazana dia manolotra kinova an-tserasera amin'ny fandaharan'izy ireo ho an'ny taranja samihafa. Misy safidy maro ho an'ny mpianatra tsirairay, noho izany dia tsy hanahirana anao izay mila ianaran'ny zanakao ianao. Fotoana lehibe koa ahazoana diplaoma nefa tsy mandeha any am-pianarana ary haka izany. Na aiza na aiza misy anao eto amin'izao tontolo izao, azo idirana ny fampianarana an-tserasera. Midika izany fa tsy mila manova toerana ianao na manaraka fandaharam-potoana iray. Hanampy anao hitsitsy fotoana sy vola izy io, izay azo laniana amin'ny zavatra ilaina hafa. Tsy misy antony tsy tokony hanombohanao hijery ny tontolon'ny fampianarana an-tserasera izao.